अव सम्भव छ , अरबौं वर्षसम्म डाटा सुरक्षित राख्न सकिने डिस्क तयार – Khabar Art Nepal
अव सम्भव छ , अरबौं वर्षसम्म डाटा सुरक्षित राख्न सकिने डिस्क तयार
By खबर आर्ट नेपाल	 On ७ बैशाख २०७६, शनिबार १९:३५
बैशाख ०७ काठमाडौं। ब्रम्हाण्डको आयु कति होला ? अनुमान मात्रै गर्न सकिने कुरा हो । वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेअनुसार, ब्रम्हाण्डको आयु १३.७७२ अरब वर्ष भइसकेको छ । त्यसै गरी, सूर्यको आयु ४.६०३ वर्ष र पृथ्वीको आयु चाहिँ ४.५४३ अरब वर्ष पुगिसकेको छ ।
मानव जीवनको आयुको तुलनामा यो अति धेरै, सोच्नै नसक्ने समयावधि हो । अब कल्पना गर्नुहोस्, के यति धेरै समयावधिभरि वा अझ भनौं, त्योभन्दा पनि बढी समयसम्म रचनाहरु, सिर्जनाहरु, फोटाहरु, भिडियोहरु सुरक्षित गरेर राख्न सकिएला ?
अहँ, त्यो त सम्भव नै छैनन नि ! सामान्य ढंगले सोच्दा हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ । तर वेलायतको युनिभर्सिटी अफ साउथएम्पटनका अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यो असम्भवलाई सम्भव हुन सक्ने विचित्रको डिस्क आविष्कार गरेका छन् ।
नेपालमा मल्लकालमै क्रिस्चियन धर्म प्रचार सुरू​